How'd it happen and more reports?: ဘယ်လို Web Store မှာ သိမ်းရင်ကောင်းမလဲ?
ဘယ်လို WebStore တွေမှာ သိမ်းကျရင်ကောင်းမလဲ? ဒါကလစဉ်ကြေးတွေနှင့် ဘယ်လောက်အထိ ပမာဏာသိမ်းလို့ရလဲ နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာပါ၊ internet ရှိရင် ဘယ်နေရာမှမဆိုကြည့်လို့ရတဲ့ သင်တို့ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကို Online ပေါ်က Website တွေမှာ သိမ်းထားချင် ရင်တော့ အောက်က နာမည်ကြီး Webite Store တွေမှာ လစဉ်ကြေးတွေနှင့် သိမ်းလို့ရတဲ့ အရွယ်ပမာဏာ တွေကို နှိုင်းယှဉ်ပြထားတာပါ.. ဈေးအပေါဆုံးကတော့ mediafire ပါဘဲ.....ဒါပေမဲ့ သင်သတိထားရမှာက ဘယ် WebStore က ပိုလုံခြုံသလဲဆိုတာပါဘဲ? ဈေးပေါတိုင်းလဲကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးနော်....
Drive, Dropbox, iCloud and More Compare
Of cours e, there's more room for differentiation with services like automatic photo-syncing and native file support, so if you have any really specific needs it's worth diggingalittle deeper to see what extra value you can drudge up.